Warar - Miyaan Ubaahanahay Saliid Mileage Sare?
Gabowgu waa qeyb nolosha ka mid ah. Markay sannaduhu sii socdaan, qaybaha naga dhigaya inay sax noqdaan uma shaqeeyaan sidii ay hore u ahaan jireen. Baabuurtu waa isku si. Way duugoobaan, gawaarida waayeelka ah ee masaafada kore lehna waxay u baahan yihiin xoogaa dheeri ah oo dheeri ah si ay hawluhu si habsami leh ugu socdaan. Taasi waa meesha saliidda masaafada sare ka soo gasho!
Sida aad u qaadi karto talaabooyin si aad caafimaad qab ugu hesho noloshaada dambe, waxaad gaarigaaga siin kartaa saliid masaafad sare leh si ay kaaga caawiso xakamaynta duugista iyo jeexitaanka la xiriira da'da weyn. Laakiin sidee ku ogaan kartaa goorta ay tahay inaad bilowdo isticmaalkeeda? Gawaarida leh 75,000 mayl ama ka badan, waqtiga ayaa laga yaabaa inuu hadda yahay.
Marka, waa maxay saliida masaafada sare?
Sida magaca ka muuqata, saliidda noocan ah waxaa loo sameeyay si wax looga qabto dhibaatooyinka gaarka ah ee ay la kulmaan gawaarida masaafada dheer, ama kuwa leh in ka badan 75,000 mayl. Waxay kaa caawin kartaa yareynta isticmaalka saliidda, qiiqa, iyo qiiqa ka soo baxa matoorada duugoobay. Saliida masaafada sare sidoo kale waxay u shaqeysaa si loo yareeyo qulqulka iyo qubashada saliida.
In kasta oo aad u isticmaali kartid saliidda masaafada sare baabuur yar yar adigoon waxyeello u geysan, arrimaha cinwaanada saliidda masaafada dheer badanaa kama muuqdaan gawaarida wax ka yar 75,000 mayl.
Sidee buu u shaqeeyaa saliidda masaafada sare?
Saliida masaafada sare waxay u shaqeysaa sida fiitamiinad badan oo awood badan, soo celinta qaybaha mashiinka duugoobay iyo ka hortagga duugista iyo jeexitaanka.
Maaddaama qaboojiyeyaasha shaabadoodu ku jirto saliidda masaafada sare ay ballaadhiyaan ayna cusbooneysiinayaan shaabadaha, saliid yar ayaa ka soo baxda mashiinkaaga. Tani waxay keenaysaa isticmaalka saliida oo yaraada, taas oo micnaheedu yahay isbadal yar oo saliid ah iyo mashiinada oo yaraada wadada.
Saliidaha masaafada dheer sidoo kale waxay ka kooban yihiin antioxidants kala duwan, saabuunta wax lagu nadiifiyo, iyo waxyaabo lagu daro si loo yareeyo xirashada iyo isku dhaca - wax walboo faa iido u leh matoorrada waqtigooda. Maaddooyinkani waxay nadiifiyaan wasakhda iyo dhoobada si dabiici ah u soo baxda waqti ka dib, iyadoo isla markaa la yareeyo khilaafaadka si mashiinkaagu u nadiifiyo sidii bisad.
Ayaa ubaahan saliid masaafo dheer?
Gawaarida ay saaranyihiin in ka badan 75,000 odometer-ka badiyaa waxay ka faa'iideysan karaan saliida masaafada dheer. Baabuurta duugga ah ee maylalka yar leh way ka faa'iideysan karaan sidoo kale, maadaama mashiinnada mashiinnada ay burburi karaan waqti ka dib iyadoon loo eegin masaafada ay u jiraan. Khatimidii xumaatay macnaheedu waa saliid daadatay, saliid daatayna waxay ka dhigan tahay in mashiinkaagu aanu sida ugu fiican u shaqeyneyn.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad u beddelatid saliid masaafad sare leh haddii:
Waxaad gaarigaaga dib uga celinaysaa geerashka waxaadna ka heli doontaa wasakhda saliidda ee dhulka ku yaal halka gaarigaagu yaalay. Dhibcaha saliidu waxay muujin karaan dabacsanaanta qaybaha mashiinka.
§ Waxaad fiirisaa daboolka hoostiisa waxaadna dareemeysaa qulqulka saliida qeybaha injiinka hoose.
Engine Mashiinkaagu wuxuu ka cod dheer yahay kan caadiga ah. Sanqadh guuxaysa ayaa laga yaabaa inay muujiso in mashiinkaagu ka faa'iideysan karo saliidda cufan ee cufan, ie, saliidda masaafada sare.
Haddii aad ka go'an tahay inaad ilaaliso gaarigaaga muddada dheer, ku dheji adeegyada dayactirka ka hortagga ah ee sida joogtada ah loo qorsheeyay, gaar ahaan isbeddelada saliidda ee saliidda masaafada dheer.
Sidee ayuu mishiinkeygu uga faa'iideystaa saliidda masaafada sare?
Saliida masaafada sare waxay wax ka qabtaa daciifnimada gaarka ah ee mashiinkaaga ee laxiriirta da'da. Waxay u egtahay boomaato bogsasho loogu talagalay qaybaha matoorrada ee aad loo isticmaalay.
Consumption Isticmaalka saliida oo yaraaday: Gawaarida masaafada badan waxay u egyihiin inay daadadaan oo ay gubtaan saliid ka badan gawaadhida da'da yar sababo la xidhiidha mashiinada oo xumaaday. Saliida masaafada sare waxay dib u cusbooneysiisaa shaabadaha duugoobay, taas oo keeneysa isticmaalka saliida oo yaraada iyo gubasho.
Lud Qulqulka mashiinka oo yaraada: Mashiinada gaboobay ayaa u muuqda inay urursadaan dhoobada ay ka tageen saliidaha kale ee matoorku. Saliida masaafada sare way kala jabtaa waxayna kala dirtaa dhoobada hadhay.
Ka ilaalinta burburka: Gawaarida masaafada badan waxay u nugul yihiin jiritaan iyo dildillaac ka badan baabuurta da'da yar. Waxyaabaha lagu daro saliidda masaafada sare ayaa ilaaliya oo ilaaliya mashiinkaaga oo dhan.
Waxaan diyaar u ahay badalkeyga saliida masaafada dheer!
Iyadoo aan loo eegin inta (ama imisa) mayl ee aad ku leedahay gaarigaaga, isbeddelada saliida ee sida joogtada ah loo qorsheeyey waxay muhiim u yihiin in gaarigaagu sii cusbooneysiiyo, kana sii dheeraado. Markaad u dhaqaaqdo beddelkaaga saliid ee xigta ee agagaarka Firestone Complete Auto Care, weydii farsamoyarahaaga wax ku saabsan is-beddelka saliidda masaafada dheer, gaar ahaan haddii aad ku aragtay wasakhda saliida ee jidkaaga ama aad maqashay mashiinka oo gariirmaya. Isbedelka saliida masaafada badan wuxuu ka caawin karaa gaarigaaga inuu gaadho dhacdadiisa weyn ee xigta!
Qeybinta Qeybinta, Khatimidii Silicone Rubber, Qalabka Gawaarida, Saliida Saliida, Qaybaha dayactirka, Xakameynta Gacan ku Qaadista,